वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : तोयोता प्लाण्ट भ्रमण
टोयोटा शहरमा रहेको टोयोटा समूहको मुख्यालय (Head Office)। यसका अरु दुई प्रमुख कार्यालयहरु टोक्यो मुख्यालय (Tokyo Head Office) र नागोया कार्यालय (Nagoya Office) हुन्।
यस्तो भ्रमणमा सहभागी हुनका लागि कम्तिमा दुई हप्ता पहिलेनै ईण्टरनेटबाट बुक गर्नुपर्ने रहेछ (जापानमै, विशेष गरी टोयोटा शहरको नजिकै रहनुभएका साथीहरुलाई रुचि छ भने यहाँ क्लिक गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ; Toyota Plant Tour)।
ठिक एघार बजे हामीजस्ता ४० जना मिसिएर बनेको हुललाई लिएर टूर बस टोयोटाको मोतोमाची प्लाण्टतिर लाग्यो। जापानभित्र टोयोटाका यो सहित १२ प्लाण्टहरु रहेछन्। ती सबै १२ प्लाण्टहरु टोयोटा शहर रहेको प्रान्त (आईची)मै रहेछन्। मोतोमाची प्लाण्टमा तोयोताका Crown, Mark X, Estima आदि मोडेलका गाडीहरु उत्पादन गरिँदो रहेछ।
मोतोमाची प्लाण्टसम्म पुग्न लाग्ने लगभग १५ मिनेटको समयमा टूर गाइडले टोयोटाको इतिहास र वर्तमान स्थितिका बारेमा कुरा गरिन्।
वर्तमान टोयोटा शहरको पुरानो नाम कोरोमो हो। उन्नाईसौं शताब्दीमा यो शहर रेशम उत्पादनका लागि प्रसिद्ध थियो र रेशमकै कारण एउटा धनी शहर मानिन्थ्यो। जापान र बिश्व बजारमा रेशमको माग घटेपछि शहरको आर्थिक स्थिति पनि खस्कियो। यो स्थितिमा एउटा रेशम उद्यमी परिवारकै उत्साही युवा किइचिरो तोयोदा सन् १९३० मा साना ग्यासोलिन ईञ्जिनहरुको अनुसन्धानमा संलग्न भए र सन् १९३३ मा उनको परिवारको रेशम उत्पादन कम्पनी Toyota Automatic Loom Works को एउटा शाखा Automobile Department को रुपमा गाडी उत्पादन शुरु गरियो। यहि शाखाले सन् १९३७ मा 'तोयोता मोटर कम्पनी लिमिटेड' को रुप लियो।
कम्पनी शुरु गर्ने परिवारको थर तोयोदा हो र अहिलेसम्म पनि उच्च तहको ब्यवश्थापनमा त्यहि परिवारका सदस्यहरुको बहुमत छ। कम्पनीको नाम 'तोयोदा' नै नराखेर 'तोयोता' राख्नुमा भने तीन प्रमुख कारणहरु देखाईएका छन्।
१) जापानी भाषाको काताकानामा 'तोयोदा' लेख्दा दश स्ट्रोक आबश्यक पर्छ भने 'तोयोता' लेख्न आठ स्ट्रोकमात्रै आवश्यक पर्छ। आठ जापानी संस्कृतिमा शुभ मानिन्छ। यसैले कम्पनीको नामको रुपमा तत्कालीन ब्यबश्थापनले 'तोयोता' लाईनै अपनाउने निर्णय गरेछ। यहि 'तोयोता' बिदेशी उच्चारणमा 'टोयोटा' बन्न पुगेको हो।
जापानमात्र नभएर चीन, ताइवान, हङकङ, कोरीया आदि चिनियाँ साँस्कृतिक प्रभावक्षेत्र भित्रका सबै ठाऊँमा आठ शुभसूचक अंक मानिन्छ।
२) दोश्रो, 'तोयोदा' नै राख्दा एउटा परिवारको बर्चस्व देखिने र 'तोयोता' राख्दा त्यस्तो कम हुने धारणा रहेछ।
थप कुरा यहाँ क्लिक गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।
टोयोटा कम्पनी र यससंग जोडिएका अरु साना-ठूला धेरै कम्पनीहरु र उद्योगहरुका कारण टोयोटा शहर एउटा अटोमोटिभ शहर (Automotive City) बनेको छ। टूर गाईडका अनुसार टोयोटा शहरको जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत टोयोटा कम्पनीमा काम गर्छ।
मोतोमाची प्लाण्टभित्र क्यामेरा, मोबाईल फोन लान दिईँदो रहेनछ।
Toyota Production System(TPS) र Toyota Way औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै अध्ययन र चर्चा-परिचर्चाका विषय हुन्। सवा एक घण्टाको भ्रमणमा धेरै जान्न/देख्न निश्चय पनि भ्याईन्न। फेरि तस्बीर खिच्न नपाईने हुँदा आफ्नो सीमित स्मरण-शक्ति बाहेक भर पर्ने अरु कुरा केहि हुन्न।
गाइडका अनुसार मोतोमाची प्लाण्ट हरेक २ मिनेटमा एउटा कार assemble गरेर निकाल्ने क्षमता राख्दछ। अहिले दिनमा औसत ३०० गाडीहरु बन्छन् रे (मेरो स्मरण गलत छैन भने)। यो मोतोमाची प्लाण्ट चीन, भारत, भियतनाम आदि १३ देशहरुमा रहेका २९ तोयोता प्लाण्टहरुको mother plant पनि हो रहेछ।
टोयोटा एउटा बिश्व प्रसिद्ध कम्पनी समूह भएकोले यसका बारेमा तपाईँहरु सबैलाई पनि पक्कै केहि न केहि थाहा छ भन्ने कुरामा म विश्वश्त छु। अहिले टोयोटा यसका केहि मोडेलका गाडीहरुमा देखिएको समस्याका कारण अझ बढी चर्चामा छ। एक हिसाबले अहिले टोयोटा यसको इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा उभिएको हुनुपर्छ। यसका गाडीहरुको बिक्री ब्यापक रुपले घटेको छ र चर्चा अनुसार हालै यसले एक जापानी बैंकसंग ३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिएको छ। गाडीमा देखिएका समस्याहरु र तिनले सृजना गरेका दुर्घटनाका बारे अमेरिकी कंग्रेसले तोयोताका वर्तमान अध्यक्ष आकिओ तोयोदा स्वयँसंग स्पष्टीकरण लियो (आकियो तोयोदा कम्पनी संस्थापक किइचिरोका नाती हुन्।)
तोयोता डुब्नु भनेको यसमा काम गर्ने/लगानी गर्ने लाखौं मान्छेहरुमात्रै डुब्ने होईन, यसकै भरमा चलेका हजारौं अरु साना-मझौला कम्पनीहरु र तिनले सृजना गरेका करोडौं रोजगारीहरु पनि डुब्नु हो। त्यसो भयो भने तोयोता शहर र नागोयामात्रै होईन, पूरै जापानको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्नेछ। यसको असर बिश्वब्यापी र ब्यापक हुनेमा पनि शंका छैन।
तोयोता खाइकान म्यूजियम र मोतोमाची प्लाण्ट घुम्दा भने पूर्ण रुपमा सकारत्मक उर्जा मात्रै अनुभव गरें मैले, तोयोतामाथि मडारिईरहेको बादलको कुनै संकेत देखिन। तोयोता आफ्ना समस्याहरुलाई समाधान गर्न र अझ फैलिन समर्थ छ भन्ने अनुभूति लिएर फर्किएँ म।
र अन्त्यमा खाईकान म्यूजियममा खिचिएका दुई छोटा भिडियोहरु राख्दैछु।
Posted by Basanta at 11:52 AM
Rishav Atreya April 17, 2010 at 12:06 PM
पढ्नुनै पर्ने लेख रहेछ पढ्दै गर्दा मैले नेपाल पनि पटक पटक समझिय हामी कति टाढा छौ त?
kshama April 17, 2010 at 2:23 PM
I simply enjoy coming to your blog & trying to slowly understand the language with ref to context!
N K M April 17, 2010 at 8:56 PM
One point though: I believe robots are made to enhance the capabilities of human beings; not to replace them. :)
रमेशमोहन अधिकारी April 18, 2010 at 12:43 AM
जापानको विकासको एक झल्को नेपालमै बसेर देख्न पाइयो । टोयोटाको पृषठभूमि र योगदानबारे पनि जनकारी पाइयो । यसका लागि धन्यवाद !
सूर्य/सिकारु April 18, 2010 at 9:47 PM
तोयोदा र टोयोताको कथा रोचक र आनन्ददायी लाग्यो मलाई पनि । सन्सार भरि प्रख्यात टोयोटाको बारेमा पढने अवसर जुटाइदिनुभएकोमा धन्यबाद बसन्तजी । लोगोले व्यक्त गरेको अर्थ जस्तै टोयोटाले आफ्नो बर्चस्व कायमै राखेको पाए मैले ।
gckarki April 19, 2010 at 3:15 AM
वसन्तजी, विश्वप्रशिद्ध टेायेाटा कम्पनी वारे राम्रेा लेख पढ्न पाउंदा अाफु पनि कम्पनी भित्रै पुगेकेा अनुभव गरे। धेरै धेरै धन्यवाद ।तपार्इवाट यस्तै जापानका अन्य गतिविधि वारे जानकारी मिलेकेा छ। धेरै जापानीहरूले फूल व्यवसाय मनपराउंछन् भन्ने सुनेकेा थिए यसवारे पनि मैाका मिले लेख्नु हेाला है ।
TAPAIKA SAMAGRIHARU KATI RAMRA LAGCHHAN !..... NISHABDA! MAUN COMMENT....!!!
Basanta April 24, 2010 at 3:35 PM
यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहन्छु।
नवीनजी, मेरो सोचाई पनि त्यस्तै हो, अपुग श्रमशक्तिको केहि समभाव्य भागलाई रोबोटको जिम्मा लगाउने हो, मानव-श्रमलाई पूरै विश्थापित गर्ने होईन। फेरि जति विकसित भएपनि रोबोटले कहिल्यै पनि गर्न नसक्ने कामहरु पनि जतिपनि बाँकी रहनेनैछन् मानव समाजमा, तिनका लागि मान्छे आफैं भिड्नुबाहेक अरु उपाय छैन।
gckarki जी, फूल ब्यवसायका बारेमा जान्ने/भ्रमण गर्ने मौका मिलेमा अबश्य पनि लेख्नेछु।
Dhruba Panthi April 27, 2010 at 7:54 PM
टोयोटा, खासगरि यसको उत्पादन प्रणाली (TPS), -का बारेमा नेपालमै छँदा धेरै पढियो, सुनियो। त्यसैले जापानमा हेर्नैपर्ने ठाउँको सूचिमा टोयोटा प्लाण्टलाई पनि राखेको छु मैले (मौका जुर्ला-नजुर्ला, त्यो भिन्दै कुरा!)। अहिलेलाई भने सरको यो टाँसो पढेरै चित्त बुझाएँ :)
Basanta April 28, 2010 at 11:01 AM
धन्यबाद पन्थीजी! अबश्य जानुहोला। एउटा अविष्मरणीय र उपयोगी अनुभव हुनेछ।